Wayland 1.19 dia miaraka amin'ny fanatsarana ny Nvidia, ny fahaizana manampy sy manala ireo fanitarana ary bebe kokoa | Ubunlog
Wayland 1.19 dia miaraka amin'ny fanatsarana an'i Nvidia, ny fahaizana manampy sy manala ireo fanitarana ary maro hafa
Rehefa afaka volana maro ny fampandrosoana ny fanafahana ny ny kinova vaovao miorina amin'ny protokol Wayland 1.19. Ity kinova vaovao 1.19 ity dia miverina mifanaraka amin'ny ambaratonga API sy ABI miaraka amin'ny kinova 1.x, ary ny ankamaroany dia misy fanamboarana bibikely sy fanavaozana kely ny protokolola.
Anisan'ireo fanovana malaza indrindra afaka mahita isika a nohatsaraina ny rafitra fanangonana izay mitaky fitaovana Meson farafaharatsiny farafaharatsiny 0.52.1, mpizara serasera Weston, manome kaody sy santionany miasa amin'ny fampiasana Wayland amin'ny birao sy tontolo iainana tafiditra, mivoatra amin'ny tsingerin'ny fampandrosoana tsy miankina izy io.
Fanovana lehibe sy vaovao any Wayland 1.19
Ao amin'ity kinova vaovao wayland ity ny patch dia efa nomanina ho an'ny mpizara XWayland DDXizany raha manana mpamily tompony ny rafitra NVIDIA, dia hamela ny fampiasana ny haingam-pandeha haingam-pandeha ao amin'ny OpenGL sy Vulkan rehefa mandefa fampiharana X amin'ny tontolo Wayland.
ihany koa Ny mpamily tompona NVIDIA dia manohy mampiditra fanitarana ilaina amin'ny fiasa feno ny tontolo iainana izay mampiasa ny protokol Wayland.
Ny zava-baovao iray hafa izay miavaka dia izany Mitohy ny fampandrosoana an'i Mir amin'ny maha mpizara azy ho an'i Wayland. Ireo fitaovana hiantohana ny fandefasana ny fampiharana Wayland ao amin'ny tontolon'ny Mir dia nampihatra ny scaling marina amin'ny efijery HiDPI.
Nanampy ny fahaizana mandanjalanja ny fivoahan'ny mpanjifa WaylandHo fanampin'izany, ny fametrahana ny refy tsy miankina dia avela ho an'ny fitaovana famoahana tsirairay, ao anatin'izany ny sandan'ny refiny.
Afaka mahita izany koa isika nanampy ny fahaizana manampy sy manala ireo fanitarana ny protokol Wayland ary nanampy fanampiana ho an'ny protokolom-panandramana: zwp_linux_dmabuf_unstable_v1 mamorona wl_buffers mampiasa ny mekanisma DMABUF sy wlr-Foreign-toplevel-fitantanana ho an'ny fampifandraisana ireo takelaka sy jiro fanao mahazatra
Efa natomboka kinova vaovao amin'ny tontolo iainana Sway ary ny mpizara Wayfire izay ampiasain'i Wayland.
Momba ny fanovana mifandraika amin'ny rindranasa sy tontolon'ny birao dia voalaza fa mitohy ny asa amin'ny famoahana ny tontolon'ny mpampiasa LXQt 1.0.0, izay hampiharina miaraka amin'ny fanohanana feno amin'ny asa any Wayland.
Wayland dia avela ho anao amin'ny alàlan'ny Plasma Mobile, Sailfish 2, webOS Open Source Edition, Tizen sy AsteroidOS.
Mandritra ny asa ankilany mitohy amin'ny fahafaha-mibaiko ny fangatahana MATE ho an'ny Wayland, ny mpijery sary Eye of MATE dia namboarina hiasa nefa tsy mifandray amin'ny X11 ao amin'ny tontolo Wayland, ary koa nohatsaraina ny fanohanan'ny Wayland amin'ny tontonana MATE ary ny applet panel-multimonitor sy panel-background dia namboarina ho ampiasaina amin'ny Wayland.
Fedora 34 dia mikasa ny hamindra ny fananganana birao KDE hampiasa Wayland amin'ny toerana misy anaona. Ny session X11 dia natao ho safidy. Ny fonosana kwin-wayland-nvidia dia ampiasaina hampandehanana ny KDE amin'ny alàlan'ny mpamily NVIDIA manan-tompo.
Ny KDE dia miasa mba hanao session mifototra amin'ny Wayland dia vonona amin'ny fampiasana isan'andro ary hahatratra ny parity amin'ny fampiasa mihoatra ny X11. Ny olana efa namboarina tamin'ny fanariana ny efijery sy ny fampidirana tsindry afovoany. Ny olana raikitra amin'ny fitoniana XWayland.
Ny GNOME ho an'ny Wayland dia nanala ny efijery manontolo tamin'ny fandikana azy rehefa dma-buf na EGLImage buffer dia ampiasaina ho an'ny fanavaozana ny fikandrana ampahany, izay mampihena ny habetsaky ny angona nafindra eo anelanelan'ny GPU sy ny CPU. Miaraka amin'ny fanavaozana misaraka ny singa interface, ity fanatsarana ity dia nampihena be ny fanjifana herinaratra rehefa mandeha amin'ny herin'ny bateria. Nanampy ny fahaizana manome ny tahan'ny fanavaozana isan-karazany isaky ny monitor.
Ao amin'ny GTK 4, ny GDK API dia nohavaozina mba hampiasa ny protokol Wayland sy ny foto-kevitra mifandraika amin'izany. Ny fiasa mifandraika amin'ny X11 sy Wayland dia nafindra hanasaraka ny lamosina.
Firefox for Wayland dia manome WebGL sy horonan-tsary haingana amin'ny alàlan'ny hardware, ankoatran'ny nanampy backend vaovao mampiasa ny mekanisma DMABUF hanome endrika sy handaminana ny fifanakalozana buffer amin'ny alàlan'ny fizotrany samihafa. Ity backend ity dia namela ny fampiharana tontolo iainana GL niraikitra ao amin'ny Firefox miorina amin'ny Wayland, fa tsy mifamatotra amin'ireo lohamilina mitambatra manokana, toa ny GNOME Mutter na KDE Kwin.
Ary farany, ho an'ireo izay liana te-hizaha toetra ity kinova vaovao ity dia azony atao ny misintona ny kaody loharano hanangonana azy ao amin'ny rohy manaraka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » sary » Wayland 1.19 dia miaraka amin'ny fanatsarana an'i Nvidia, ny fahaizana manampy sy manala ireo fanitarana ary maro hafa
Tonga ny Vivaldi 3.6 miaraka amin'ny fanatsarana ny vakizoro, ny famoahana ireo takelaka tranonkala sns
Ubuntu 21.04 dia hanandrana indray miaraka amin'ny Wayland